ShweMinThar: February 2018
Posted by Alex Aung at 1:53 AM No comments:
​လေ့ကျင့်​ခန်း၏ ပြင်းအား(intensity) ဆိုတာကို အကြမ်းဖျဉ်း ရှင်းပြချင်​ပါတယ်​။ intensity ဆိုတာ ​လေ့ကျင့်​ခန်းပြုလုပ်​​နေစဉ်​အတွင်းမှာ energy ဘယ်​​လောက်​အသုံးပြုလိုက်​သလဲ ဆိုတာကို ကိုယ်​စားပြုတာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ​လေ့ကျင့်​ခန်းပြုလုပ်​​နေစဉ်​ အတွင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်​ ဟာ သုံးစွဲ လိုက်​တဲ့ ​လောင်​စာဆီ ပမာဏ ကိုဆိုလိုတာဖြစ်​ပါတယ်​။ ​နောက်​တနည်းအ​နေနှင့်​ intensity ဟာ ကိုယ်​လက်​လှုပ်​ရှားမှု စွမ်းအား (physical power) ဖြစ်​ပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်​ဟာ ​လေ့ကျင့်​ခန်းလုပ်​​နေစဉ်​အတွင်း ​အောက်​စီဂျင်​ သုံးစွဲမှု (oxygen consumption) ပမာဏ ဘယ်​​လောက်​များသလဲ ဆိုတဲ့ အ​ပေါ်မှာ အ​ခြေခံပါတယ်​။
ကြွက်​သား​တွေ ကြီးထွားချင်​လို့ပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​၊ အဆီ​တွေ​လောင်​ကျွမ်းချင်​လို့ပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်းပြုလုပ်​ရာမှာ ပြင်းအား(intensity) ဟာ ကစားသမား​တွေ နဲ့ တိုက်​ရိုက်​သက်​ဆိုင်​ပါတယ်​။ ဥပမာ...စက်​ဘီး စီးတယ်​ဆိုပါစို့။ ၁၀ မိနစ်​ စက်​ဘီး စီးလို့ ​ချွေး​တွေ ပြိုက်​ပြိုက်​ထွက်​ပြီး အသက်​ကို မနည်းရှူ​နေရတဲ့ သူ ရဲ့ အသုံးပြုလိုက်​တဲ့စွမ်းအင်​၊ ​လောင်​ကျွမ်း သွားတဲ့ kcal နဲ့ ၁၀ မိနစ်​ စက်​ဘီး စီးပြီးလို့ ​ချွေး​တောင်​ မထွက်​တဲ့သူ ရဲ့ စွမ်းအင်​အသုံးပြုမှု၊​လောင်​ကျွမ်းသွားတဲ့ kcal နိုင်းယှဉ်​မယ်​ဆိုရင်​ ဘယ်​လိုမှ မတူညီနိုင်​ပါဘူး။ တစ်​ချို့ ဆိုရင်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်း​လေးလုပ်​လိုက်​ selfie ​လေးရိုက်​လိုက်​၊ ​လေ့ကျင့်​ခန်း​လေးလုပ်​လိုက်​ ဖုန်း​လေးပွတ်​လိုက်​၊ စကား​လေး​ပြောလိုက်​နဲ့ အချိန်​​တွေသာ ကုန်​သွားတယ်​ ​ပြောင်းလည်းမှုက တိုးတက်​မလာပါဘူး။ gym ကစားတာ ၂/၃ လသာကြာလာတယ်​ ပိန်​လည်းမသွားဘူး၊ ကြီးထွားချင်​တဲ့သူ​တွေကလည်း ​ပြောင်း​လည်းမလာပဲ လိုချင်​တဲ့ target မရရှိကြပါဘူး။ ကြာလာ​တော့ gym ကစားတာကို စိတ်​မပါ​တော့ပဲ gym ကစားလည်း အလကားပါ ဘာမှ မတိုးတက်​လာပါဘူးဆိုတဲ့ အမြင်​မျိုး၊ အ​တွေးမျိုး​တွေ ဝင်​လာတတ်​ပါတယ်​။
ကစားသမား​တွေ အ​နေနှင့်​ ​လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ intensity ကို ဂရုမပြုမိကြလို့၊ သတိမထားမိကြလို့ပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ပိန်​ချင်​လို့ပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊ ကြီးထွားချင်​လို့ပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​ intensity ဟာ အဓိကကြတဲ့ ​နေရာမှာ ရပ်​တည်ေ​နပါတယ်​။ မိမိ ခန္ဓာကိုယ်​ ကို စိတ်​ကြိုက်​ပုံ​ဖော်​ပြီး၊ ​ပြောင်းလည်းဖို့ဆိုရင်​ intensity ဆိုတဲ့ ​လေ့ကျင့်​ခန်းပြင်းအားကိုလည်း အတိအကျ လိုက်​နာရပါမယ်​။ နည်းစနစ်​​တွေ ဘယ်​​လောက်​​ကောင်း​ကောင်း intensity မ​ကောင်းရင်​လည်း ရလဒ်​ က zero ပါပဲ။ ဝိတ်​ချချင်​တဲ့ လူ နှစ်​ဦး ကို တူညီတဲ့ workout ​တွေ ​​ပေးပြီး၊ intensity ပြင်းအား​ကောင်း​ကောင်းနဲ့ ​လေ့ကျင့်​တဲ့ သူနှင့်​ သာမန်​ပဲ ​လေ့ကျင့်​တဲ့သူ နှစ်​ဦးရဲ့ ရလဒ်​ ဟာ လွန်​စွာမှ ခြားနားတာကို ​တွေ့ရှိရမှာဖြစ်​ပါတယ်​။ ခန္ဓာကိုယ်​ ကြီးထွားချင်​တဲ့ သူ​တွေလည်း intensity ကွာခြားတာနဲ့ ​ပြောင်းလည်းမှု ဟာ ကွာခြားတာကို ​တွေ့ရှိရပါတယ်​ (တစ်​​ကျော့နှင့်​တစ်​​ကျော့ကြား အကြာကြီးနားခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်​မှု မရှိခြင်း) ။အဲဒီ​တော့ intensity ရဲ့အ​ရေးပါမှုကို သိရှိ​လောက်​ပြီထင်​ပါတယ်​။
​ကောင်းပြီ.. ကစားသမား​တွေ အ​နေနဲ့ မိမိရဲ့ intensity ကို ဘယ်​လိုတိုင်းတာရမလဲ ဆိုရင်​ နည်းလမ်း​တွေ များစွာရှိတဲ့အနက်​မှ လွယ်​ကူ ရိုးရှင်းပြီး ကစားသမားတိုင်း နားလည်​လွယ်​မဲ့ နည်းလမ်း နှစ်​မျိုးကို တင်​ပြချင်​ပါတယ်​။
​လေ့ကျင့်​ခန်း၏ ပြင်းအား intensity ကို တိုင်းတာစစ်​​ဆေး တဲ့ ​နေရာမှာ စကား​ပြောခြင်းဖြင့်​ စစ်​​ဆေးခြင်းဟာ အလွယ်​ကူဆုံးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး စမ်းသတ်​နည်းဖြစ်​ပါတယ်​။​အောက်​ပါတို့ကို​လေ့လာကြည့်​ရ​အောင်​ပါ-
# ​လေ့ကျင့်​ခန်းပြုလုပ်​​နေစဉ်​အတွင်း(သို့) ပြီးဆုံးချိန်​မှာ ကစားသမားတစ်​​ယောက်​ဟာ စကားလည်း​ကောင်း​ကောင်း​ပြောနိုင်​မယ်​၊ သီချင်းတစ်​ပုဒ်​ ​တောင်​ ဆိုနိုင်​​သေးတယ်​ဆိုရင်​ သူ့ရဲ့ ကစားလိုက်​တဲ့ ပြင်းအား intensity က မ​ကောင်းပါဘူး။ အားထည့်​မကစားပဲ ​ရေသာခိုပြီး သာသာယာယာ ပဲ ကစားတဲ့ သူဖြစ်​ပါတယ်​။ အချိန်​​တွေသာကုန်​သွားတယ်​ ရလဒ်​ က​တော့ zero ပါ။​ပြောင်းလဲ မလာပါဘူး။ gym ​တွေမှာ အများဆုံး​တွေ့ရှိရတဲ့ ကစားသမားများဖြစ်​ပါတယ်​။
# ​လေ့ကျင့်​ခန်းပြုလုပ်​​နေစဉ်​အတွင်း(သို့) ပြီးဆုံးချိန်​မှာ ကစားသမားတစ်​​ယောက်​ဟာ စကား​တော့​ပြောနိုင်​တယ်​၊ သီချင်းစာသား အချို့ ကို ​ဖြောင့်​​အောင်​မဆိုနိုင်​ဘူးဆိုရင်​ သူ့ရဲ့ ပြင်းအား intensity ဟာ အလယ်​အလတ်​ အဆင့်​ဖြစ်​ပါတယ်​။သူ့ရဲ့ပြင်းအားဟာ ၆၀% ~ ၇၀% ကြားမှာရှိ​နေပါတယ်​။ကစားသမားအသစ်​​တွေ လိုက်​ပါကစားဖို့အကြံပြုတင်​ပြချင်​ပါတယ်​။
# ​လေ့ကျင့်​ခန်းပြုလုပ်​​နေစဉ်​အတွင်း(သို့) ပြီးဆုံးချိန်​မှာ ကစားသမားတစ်​​ယောက်​ဟာ သီချင်းဆိုဖို့ မဆိုထားနှင့်​ စကားကို​တောင်​ အနည်းငယ်​ ပဲ ​ပြောနိုင်​မယ်​ဆိုရင်​​တော့ သူ့ရဲ့ ပြင်းအား intensity က အလယ်​အလတ်​အဆင့်​ထက်​ပိုပြီး ပြင်းအား ​ကောင်း​တဲ့ အဆင့်​မှာရှိ​ ​နေပါတယ်​။သူ့ရဲ့ ပြင်းအားဟာ ၇၀% ~ ၈၀% ကြားမှာရှိ​နေပါတယ်​။
# ​လေ့ကျင့်​ခန်းပြုလုပ်​​နေစဉ်​အတွင်း(သို့) ပြီးဆုံးချိန်​မှာ ကစားသမားတစ်​​ယောက်​ဟာ သီချင်းလည်းမဆိုနိုင်​ဘူး၊ စကားကို​တောင်​ တစ်​လုံးစ၊ နှစ်​လုံးစ ပဲ​ပြောနိုင်​ပြီး၊ အသက်​ကို​တောင်​ မနည်းလုပြီးရှူ​နေရရင်​​တော့ သူ့ရဲ့ ပြင်းအား intensity ဟာ သိပ်​​ကောင်းပြီး၊ ပြင်းအားအရမ်းမြင့်​တဲ့အတွက်​ ကစားသမားအသစ် ​တွေ ​လိုက်​ပါမကစားသင့်​​ပါဘူး။သူ့ရဲ့ ပြင်းအားဟာ ၉၀% ~ ၁၀၀% အ​နေအထားမှာရှိ​နေပါတယ်​။
အထက်​​ဖော်​ပြပါ ​လေ့ကျင့်​ခန်း၏ ပြင်းအား​တွေ ၊ အားထည့်​ပြီးကစားတဲ့ ပြင်း​အား​တွေ ကွာခြားတာနဲ့ အမျှ တစ်​​ယောက်​နှင့်​တစ်​​ယောက်​ ​ပြောင်းလည်းမှု ရလဒ်​ ဟာ ​သေချာ​ပေါက်​ ကွာဟ တယ်​ဆိုတာ အ​ထွေအထူး​ပြောစရာမလိုပဲ သိ​နိုင်​ပြီ ထင်​ပါတယ်​။
မှတ်​ချက်​။ ကျန်းမာ​ရေး ချို့တဲ့သူ၊ နှလုံး​ရောဂါရှိတဲ့သူ​တွေ အ​နေနှင့်​ ဆရာဝန်​၏ လမ်းညွှန်​မှုကိုရယူပါသင့်​ပါတယ်​။
(၂) နှလုံးခုန်​နှုန်းဖြင့်​ စမ်းသပ်​စစ်​​ဆေးခြင်း
အထက်​မှာတင်​ပြထားတဲ့ စကား​ပြောခြင်းဖြင့်​ စမ်းသတ်​စစ်​​ဆေးခြင်းက​တော့ ကစားသမား​တွေ အားလုံးကို ရည်​ရွယ်​ ပြီး​ဖော်​ပြထားတာဖြစ်​ပြီး ​ယေဘူယျ general အဖြစ်တင်ပြထားတာဖြစ်​​​ပါတယ်​။ ယခုတင်​ပြမဲ့ နှလုံးခုန်​နှုန်းဖြင်းစမ်းသတ်​စစ်​​ဆေးခြင်းက​တော့ တစ်​ဦး တစ်​​ယောက်​ခြင်းစီ ရဲ့ နှလုံးခုန်​နှုန်းကို မူတည်​ပြီး စစ်​​ဆေးခြင်းဖြစ်​တဲ့အတွက်​ ပိုမိုတိကျ​ကောင်းမွန်​ပါတယ်​။ persional trainer ​တွေ သိထားသင့်​​ကြောင်း အကြံပြုတင်​ပြချင်​ပါတယ်​။
ကစားသမား တစ်​ဦး ရဲ့ အမြင့်​ဆုံး နှလုံးခုန်​နှုန်း(maxium heart rate) ကိုသိဖို့အတွက်​ ဆိုရင်​ ပုံ​သေနည်း(formula) အရ- ၂၂၀ ထဲမှ မိမိ၏ အသက်​ကို နုတ်​ရပါမယ်​။ မိမိအသက်​က ၅၀ ဆိုပါစို့ ( ၂၂၀-၅၀= ၁၇၀) mexium heart rate က (၁၇၀) ဖြစ်​ပါတယ်​။ ပြင်းအား အလယ်​အလတ်​ဖြစ်​တဲ့ ၆၀% ~ ၇၀% နဲ့ ကစားမယ်​ဆိုရင်​ ​အောက်​ပါအတိုင်းဆက်​လက်​တွက်​ယူရပါမယ်​-
ပြင်းအားအလယ်​အလတ်​ ၆၀% = ၁၇၀ × ၀.၆၀= ၁၀၂ (bpm) တစ်​မိနစ်​ နှလုံးခုန်​နှုန်း ဖြစ်​ပါတယ်​။
ပြင်းအားအလယ်​အလတ်​ ၇၀% = ၁၇၀ × ၀.၇၀ = ၁၁၉ (bpm) တစ်​မိနစ်​ နှလုံးခုန်​နှုန်း ဖြစ်​ပါတယ်​။
# အသက်​ ၅၀ အရွယ်​ ကစားသမားတစ်​ဦးဟာ ပြင်းအားအလယ်​အလတ်​ ၆၀% ~ ၇၀% နဲ့ကစားမယ်​ဆိုရင်​ တစ်​မိနစ်​ ရှိသင့်​တဲ့ နှလုံးခုန်​နှုန်းဟာ ၁၀၂ ~ ၁၁၉ (bpm) ကြားမှာရှိသင့်​ပါတယ်​။
ပြင်းအား​ကောင်းတဲ့ အဆင့်​ဖြစ်​တဲ့ ၇၀% ~ ၈၀% ကို ​အောက်​ပါအတိုင်းတွက်​ချက်​နိုင်​ပါတယ်​-
ပြင်းအား​ကောင်း ၇၀% = ၁၇၀ × ၀.၇၀ = ၁၁၉ (bpm)
ပြင်းအား​ကောင်း ၈၀% = ၁၇၀ × ၀.၈၀ = ၁၃၆ (bpm)
# အသက်​ ၅၀ အရွယ်​ ကစားသမားတစ်​ဦးဟာ ပြင်းအား​ကောင်း​ကောင်းနဲ့ ၇၀% ~ ၈၀% နဲ့ကစားမယ်​ဆိုရင်​ တစ်​မိနစ်​ ရှိသင့်​တဲ့ နှလုံးခုန်​နှုန်းဟာ ၁၁၉ ~ ၁၃၆ (bpm) ကြားမှာရှိသင့်​ပါတယ်​။
မိမိ၏ အသက်​အရွယ်​ ​ပေါ်မူတည်​ပြီး၊ ပြင်းအား အလယ်​အလတ်​၊ ပြင်းအား​ကောင်း တို့ကို အ​ခြေပြုကာ ရည်​မှန်းချက်​ target ကို ​ရောက်​နိုင်​ဖို့အတွက်​ တွက်​ချက်​နိုင်​ပြီဖြစ်​ပါတယ်​။ လွယ်​ကူစွာတွက်​ချက်​နိုင်​ရန်​အတွက်​ ပုံ(၁) တွင်​ ဇယားဖြင့်​​ဖော်​ပြထားပါတယ်​။ မိမိ၏ အသက်​ကို အစားထိုးထည့်​သွင်းခြင်းဖြင့်​ တစ်​မိနစ်​တွင်​ရှိသင့်​သည့်​ နှလုံးခုန်​နှုန်းကို သိရှိနိုင်​ပြီဖြစ်​ပါတယ်​။
နှလုံးခုန်​နှုန်းကို ဘယ်​လိုတိုင်းတာမလဲဆိုရင်​ ​အောက်​ပါအတိုင်း တိုင်းတာနိုင်​ပါတယ်​...
* ၁၀ မိနစ်​ ​ခန့်​ ကစားပြီးရင်​ ရပ်​လိုက်​ပါ။
* လက်​​ကောက်​၀တ်​ ​ပေါ်တွင်​ လက်​နှစ်​​ချောင်းဖြင့်​ အသာအယာ ဖိပြီး​သွေးခုန်​နှုန်းကို စမ်းသတ်​ပါ။လက်​မ တစ်​​ချောင်းတည်းဖြင့်​ မဖိရ။
* ၁၅ စက္ကန့်​ ကြာသည်​အထိ ​သွေးခုန်​သည့်​ အကြိမ်​အ​ရေအတွက်​ကို မှတ်​သားထားပါ။
* ရရှိသည့်​ ​သွေးခုန်​နှုန်းကို ၄ ဖြင့်​​မြှောက်​ပါက တစ်​မိနစ်​ ​သွေးခုန်​သည့်​အ​ရေအတွက်​ကို ရရှိပြီဖြစ်​ပါတယ်​။
* ရရှိသည့်​ ​သွေးခုန်​နှုန်း ကိုမူတည်​၍ မိမိ၏ ရည်​မှန်းချက်​ အတိုင်း ပြင်းအားနည်း​နေလျင်​ ပြင်​အားမြှင့်​ကစားပြီး၊ ပြင်းအားများ​နေလျင်​ ​လျော့ချ နိုင်​ပါတယ်​။ပြင်းအားနည်းပါက အချိန်​ကြာကြာ ကစားနိုင်​ပြီး၊ ပြင်းအားမြင့်​ပါက အချိန်​ အနည်းငယ်​သာ ကစားသင့်​ပါသည်​။
​ပြောင်းလည်းမှု​တွေ အလှမ်း​ဝေး​နေတဲ့ ကစားသမားများ၊ ရည်​မှန်းချက်​ ကို အ​ရောက်​သွားချင်​​သောကစားသမားများ နှင့်​၊ ​ကုန်ဆုံးသွားေ​သာ အချိန်​များ၊ ​​ပေးစပ်လိုက်ရေ​​သာ ​ငွေ​ကြေးများအတွက်​ တန်​ဖိုးနှင့်​ ​လျော်​ညီသည့်​ ရလဒ်​ ကို ပြန်​လည်​ရရှိဖို့အတွက်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်း၏ ပြင်းအား intensity. ၏ အ​ရေးပါမှု ကို ကစားသမားများသိရှိ တန်​ဖိုးထားတတ်​​စေရန်​ ရည်​ရွယ်​၍ တင်​ဆက်​လိုက်​ရပါသည်​။
မှတ်​ချက်​။ ဤစာစု ငယ်​ဖြင့်​ ဆရာနိုင်​ဦးအား ဂါရဝပြု အပ်​ပါသည်​။
Olympia Fitness Centre ( သုဝဏ္ဏ )
Posted by Alex Aung at 6:22 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 5:40 AM No comments:
ရောင်းမှားဝယ်မှား မဖြစ်ရအောင် မြေအမျိုးအစား အလိုက် စစ်ဆေးသင့်သော စာရွက်စာတမ်း များအကြောင်း
ရောင်းမှားဝယ်မှား မဖြစ်ရအောင် မြေ အမျိုးအစား အလိုက် စစ်ဆေးသင့်သော စာရွက်စာတမ်းများအကြောင်းအိမ်ခြံမြေဈေး ကွက်အတွင်းမှာ မြေ၊ တိုက်ခန်း ရောင်းဝယ်မှုတွေမှာ ရောင်းမှား ဝယ်မှားမဖြစ်ပေါ်စေဖို့ မြေ အမျိုးအစား အလိုက် စစ်ဆေးရမယ့် စာရွက် စာတမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေ၊တိုက်ခန်း ဝယ်ယူမယ်ဆို ရင် အိမ်ခြံမြေ၊ တိုက်ခန်းအမျိုးအစား အ လိုက် လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေက အပြည့်အဝ မတူညီနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် အိမ်ခြံမြေ၊ တိုက်ခန်း ဝယ်ယူတဲ့အခါ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း အပြည့်အစုံကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ခြံမြေဝ ယ်ယူသူတွေ အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို သိရှိထားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
– ဂရန်မြေ ဝယ်မယ်ဆိုရင် ဂရန်အမည် ပေါက် “မှန် မမှန်၊ စစ် မစစ်” ကို သက်ဆိုင်ရာ ရုံးမှာ သွားရောက် စစ်ဆေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရန်မြေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်ဆေးရမယ့် စာရွက်စာ တမ်းက နည်းပါတယ်။ ဂရန်အမည်ပေါက် မှန် မမှန်ကိုသာ ရုံးမှာ သွားရောက် စစ်ဆေး ဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။
ပါမစ်မြေ ဆိုတာကတော့ မြို့သစ်ဘက်တွေမှာ ချထားပေးတဲ့မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ပါမစ်မြေကို ဝယ်ယူမယ် ဆိုရင် ချ ထားပေးတဲ့ပါမစ် မှန် မမှန်၊ အဆို ပါ ပါမစ် ကို အင်ထရီပြင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါ တယ်။ အင်ထရီဆိုတာက မြေနေရာ အ ကွက် ချ ပြီး ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပါမစ်ကို ပြန် လည် စစ်ဆေးပြီး နေထိုင်ခွင့်ပြုတဲ့အမှတ် တံဆိပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ထရီဝင်ပြီးသား ပါမစ်ဆိုရင် နောက်ကျောဘက်မှာ လေးထောင့် တံဆိပ်တုံးလေးနဲ့ ပြန်လည်စိစစ် ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပါရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင် ထရီ မဝင်ရသေးတဲ့ မြေကွက်တွေက ဈေး ကွက်အတွင်းမှာ ဈေးနှုန်းကွဲလွဲမှုရှိတယ် လို့ သိရတယ်။ “ဈေးနှုန်းမကွာဘူးဆိုရင်တောင် ရာ တန်အကွက်တွေမှာ ဈေး ငါးသိန်း၊ ၁၀ သိန်း ကွာတယ်၊ ထောင်တန် အကွက်တွေမှာဆိုရင် အင်ထရီမဝင်ရသေးလို့ ပွဲပျက် တာတွေတောင် ရှိတယ်”လို့ မြန်မာ့ရတနာ မြေ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်မှ အမ်ဒီ ကို ဝင်းနိုင်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ပါမစ်မြေမှာ စာရွက်စာတမ်းလည်း မှန်ကန်မှုရှိပြီး အင်ထရီလည်း ဝင်ထား မယ်ဆိုရင် အမည်ပေါက်ပိုင်ရှင်ရဲ့ မှတ်ပုံ တင် မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ ပါရှိရပါမယ်။ အဆိုပါ မိတ္တူတွေကိုလည်း မူရင်းနဲ့ တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
လယ်မြေ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ လယ်မြေအတွက် အစိုးရ ကို အခွန်ပေးထားတဲ့ စလစ်၊ လယ်ယာမြေမှတ်ပုံတင် စာအုပ်၊ ပုံစံ(၇)၊ စလစ် up to date ဖြစ် မဖြစ် စစ် ဆေးရပါမယ်။ စလစ် up to date ဆိုတာကတော့ အစိုးရကို အခွန်ငွေပေးသွင်းထား တဲ့နှစ်က အနီးဆုံးနှစ် ဖြစ်ရပါမယ်။ လယ်ယာမြေမှာ ပိုင်ဆိုင်မှု စာရွက်စာ တမ်းဆိုတာ “လယ်ယာမြေ လက်ဝယ်ရှိသူတိုင်း” ရဲ့လက်ထဲမှာ မရှိနိုင်ပါဘူး။ လယ်ယာမြေကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်တဲ့အပေါ် အခွန် စည်းကြပ်ခံထားရတဲ့ မြေခွန် ပြေစာ နှင့် ပုံစံ(၇) သည်သာ ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန် တကယ် လယ်ယာမြေကို လုပ်ကိုင်နေပြီး အခွန်စည်းကြပ်မှုကိုလည်း ထမ်းဆောင်ထားမယ်ဆိုရင် လယ်ယာမြေ လက်ရှိ ရှိသူအနေနဲ့ အင်္ဂါရပ်ညီညွတ်ပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါ တယ်။ လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်သူတွေကို မြေစာရင်းဌာနက အခွန်စည်းကြပ်မှု မှတ်ပုံတင်စာရင်းနဲ့ မြေပုံမှာ မှတ်သားထား လေ့ရှိပါတယ်။
တချို့လယ်ယာမြေတွေက အခွန်ပြေစာအပြင် မြေစာရင်းပုံစံ ၁၀၅ ကိုလည်း ရေးကူးရယူထားရှိနိုင်ပါတယ်။ မြေစာရင်းပုံစံ ၁၀၅ ဆိုတာက မြေစာရင်းဌာနက မှတ် ပုံတင်စာရင်း၊ မြေပုံ စသည်တို့မှာ မှတ်သား ထားတဲ့အတိုင်း မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းတဲ့ မြေစာရင်း ဌာန က ပုံစံတူရေးကူးပေးတဲ့ ပုံစံ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မြေစာရင်း ပုံစံ ၁၀၅ မှာ မြေကွက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို တစုတစည်း သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ပုံစံ ၁၀၅ မှာ ဖော်ပြချက်အရ မြေကွက်တည်ရှိ တဲ့ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ ကွင်း၊ ဧရိယာ၊ မြေအမျိုးအစား စတာတွေကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ “လယ်ယာမြေကို စလစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ အရောင်းအဝယ်လုပ်တာတွေ ရှိတယ်၊ အဲ ဒါတွေက ရေရှည်မှာ အဆင်မပြေပါဘူး”လို့ ကိုဝင်းနိုင်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ပုံစံ(၇) ကျထားပြီးသောလယ်ယာမြေတွေက ပိုင်ဆိုင်မူခိုင်မာတယ်လို.ဆိုပါတယ်။ အရှုပ်အရှင်းရှိတဲ့ လယ်မြေ၊ လယ်ယာမြေ နဲ. ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားနေတဲ့နေရာတွေကလယ်မြေ၊ ယာမြေတွေကို ပုံစံ(၇) မချပေးဘူးလို.သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လယ်မြေ၊ လယ်ယာမြေဝယ်မည်ဆိုပါက ပုံစံ(၇) ရှိမရှိကို အရင်စုံစမ်းသင့်ပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာ လယ်ယာမြေကို အရပ် သဘောရောင်းဝယ်နေကြပြီး စာချုပ်စာ တမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ လယ်ယာမြေဥပဒေ သစ်အရ မှတ်ပုံတင်ပြီးမှသာ တရားဝင် ဆောင်ရွက်လို့ရမှာ ဖြစ်တယ်။
လန ၃၉ ဆိုတာက လယ်ယာမြေမှ တစ်ဆင့် အခြားမြေအဖြစ် ပြောင်းလဲ အ သုံးပြုခွင့် ပြုထားတဲ့ မြေအမျိုးအစားဖြစ်ပါ တယ်။ လန ၃၉ မြေ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် လယ်ယာမြေကနေ အခြားမြေ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခွင့်ပြုထားတဲ့ လန ၃၉ စာရွက် ရှိ ရပါမယ်။ ဒါမှသာ လယ်ယာမြေကို အိမ် ယာမြေ၊ စက်မှုထုတ်ကုန် တစ်ခုခု ပြောင်း လဲ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် လန ၃၉ ချထား ပေးတဲ့ စာရွက်ရှိမှ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
တိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်တဲ့ အခါမှာ ဆက်စပ်စာချုပ်တစ်ခုရှိရုံ နဲ့ ပိုင် ဆိုင်မှု အထောက်အထား ပြည့်စုံပြီလို့ မထင်မှတ်သင့်ပါဘူး။ တိုက်ခန်းအရောင်း အဝယ်ပြုလုပ်တဲ့နေရာ မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကတော့ ဆက်စပ် စာချုပ်၊ BCC (လူနေထိုင်ခွင့်) ၊ မြေ ရှင်လက်မှတ်၊ ရေမီတာ၊ မီးမီတာ စာရွက်စာတမ်းတွေ လို အပ်ပါတယ်။ အဲသည် စာရွက်စာတမ်းတွေ ပါရှိရင်တော့ ပိုင်ဆိုင်မှု သေချာနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ မြေပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်တမ်းမှာ ပိုင်ရှင်အဖြစ် မှတ်တမ်းရှိပြီး ဖြစ်ရမှာ ဖြစ် ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 1:07 AM No comments:
Labels: News and Info, စီးပွားရေး, ဗဟုသုတ
“..ရူးနေအောင် အလှပြင်ထား.. ငါ့ပုံစံ လန်းနေလား..”
ဆေးခန်းရဲ့ အ၀င်ဝမှာ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ သီချင်းသံက ခပ်တိုးတိုးလေး ထွက်ပေါ်နေတယ်။ ဆေးခန်းပြဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ လူနာတွေကတော့ တီဗွီကို ငေးလိုက်၊ စာစောင်ငုံ့ဖတ်လိုက်၊ စကားစမြည် ပြောလိုက်နဲ့ပေါ့။ တီဗွီဖန်သားပြင်ထက်မှာတော့ အရမ်းကို လှပနေတဲ့ မင်းသမီးလေးတွေက မိန်းကလေးဘ၀ဟာ ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းကြောင်း၊ သူတို့ ဘယ်လောက်နှစ်သက်ကြောင်းကို သီချင်းအဓိပ္ပါယ်နဲ့ လိုက်ဖက်စွာ တက်တက်ကြွကြွ ရွှင်ရွှင်လန်းလန်း သရုပ်ဖော်ပြနေလေရဲ့။
ဆွေးနွေးခန်းအတွင်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ ရှေ့တည့်တည့်မှာတော့ အသက် ၁၀နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးတစ်ယောက်နဲ့ သူ့အမေ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်တို့ ထိုင်နေတယ်။ ကလေးလေးက ကျွေးထားတဲ့မုန့်ကို အပူအကင်းစွာ စားနေပေမဲ့ သူ့အမေရဲ့ မျက်လုံးတွေမှာတော့ မျက်ရည်တွေက တွဲလို့ ခိုလို့။
“ဟုတ်ကဲ့၊ ဖြစ်ပုံလေး ပြောပြပါဦး”
“ဒီလိုပါ ဆရာ၊ အဲဒီလူကြီးက ကျွန်မတို့ရပ်ကွက်ထဲကပါပဲ။ ဘုရားတရား လုပ်လွန်းလို့တောင်မှ အားလုံးက လေးစားနေကြတာ၊ ကလေးတွေကိုလည်း ခေါ်ပြီးမုန့်ကျွေးလိုက်၊ မုန့်ဖိုးပေးလိုက် အမြဲလုပ်နေကျ၊ ကလေးတွေကလည်း သူ့အိမ်ကို အမြဲတမ်း ၀င်နေ ထွက်နေတာပါပဲ။ ကျွန်မတို့ကလည်း မထင်ဘူးပေါ့။ အခု သူတို့ကလေးချင်းပြောနေတာကို ကြားတော့မှပဲ သိရတာ။ သမီးကလည်း ငယ်သေးတော့ ဘာမှန်းသိတာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မပြောရဘူး၊ ပြောရင် သတ်ပစ်မယ်လို့လည်း ခြိမ်းခြောက်လိုက်သေးတာ တဲ့။ ဖြစ်တာကတော့ ၂လလောက်တောင် ရှိနေပြီ ဆရာ”
“ဟုတ်လား၊ သမီးလေးလည်း မှတ်မိသလောက် ဦးကို နည်းနည်းပြောပြပါဦး။”
“သမီးတို့က သူ့အိမ်ရှေ့မှာ ကစားနေတာ၊ အဲဒါနဲ့ မောလို့ သူ့အိမ်မှာ ရေ၀င်သောက်တုန်း အခန်းထဲကိုလိုက်ခဲ့၊ မုန့်ကျွေးမယ် ဆိုပြီး ခေါ်တယ်။ ပြီးတော့.. ..”
အဲဒီလူကြီးက သူ့ကို ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ကြောင်း လက်ထဲမှာ ဆော့ဖို့ပေးထားတဲ့ ဘိုမအရုပ်လေးနဲ့ သရုပ်ပြပေးပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာ ဘာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်မှ မရှိသလို၊ ဖြစ်ခဲ့တာကလည်း ၂လလောက်တောင် ရှိနေပြီမို့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအနေနဲ့ လုပ်ပေးနိုင်တာတော့ သိပ်မကျန်တော့ပါဘူး။ ကလေးကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေးဖို့နဲ့ လူမှုရေးပိုင်း အကူအညီတွေ ရအောင် ချိတ်ဆက်ပေးဖို့ပဲ လုပ်စရာရှိပါတော့တယ်။ အဲဒီလို ကျွန်တော့်ဆီကို ရောက်လာတဲ့သူတွေ အားလုံးနီးပါးက ဖြစ်ပြီးတာ အတော်ကြာမှ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လာယူကြတဲ့ delayed care seeker တွေချည်းပါပဲ။ ဒီကလေးကကျတော့ အမေက စာမတတ်ဘူး၊ အဖေက အဝေးမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေတယ်။ နောက်ကလေးတစ်ယောက်က မိဘမဲ့၊ အရက်သမား ဦးလေးနဲ့ အတူတူနေတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကျပြန်တော့ အဖေက လက်လုပ်လက်စား၊ အမေက လေဖြတ်ပြီး အိပ်ရာထဲလဲနေတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကျ ဥာဏ်ရည်မမီဘူး။ သူတို့အကြောင်းတွေ နားထောင်ရင်း ကိုယ်ပါ မျက်ရည်ကျချင်မိပါတယ်။ ပျောက်သောလမ်းမှာ စမ်းတ၀ါးဝါးဖြစ်ရုံတင်မဟုတ်ဘူး၊ လုံးဝကို မှောင်အတိကျနေတာပါ။
မီဒီယာတွေ ပိုပွင့်လင်းလာတဲ့ ခုနောက်ပိုင်းမှာ အရမ်းကို အတွေ့ရများလာတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကတော့ ကလေးသူငယ် အဓမ္မပြုကျင့်မှု (Child sex abuse) ပါပဲ။ ဒါတောင် မီဒီယာတွေပေါ် တက်မလာတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးပဲ ရှိဦးမှာပါ။ ကလေးဆိုတော့ ဘာမှမသိသေးတာကိုပဲ အခွင့်ကောင်းယူနေကြလား၊ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်သေးတဲ့အရွယ်မို့ပဲ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ ဘာမှမရှိဘူးလို့ ထင်နေကြလားတော့ မသိပါဘူး၊ မောင်နှမသားချင်းတွေမှာလည်း ဖြစ်ရဲ့၊ လက်နဲ့ ဒါမှမဟုတ် တခြားပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ထည့်ပြီး ကျူးလွန်ကြတာတွေလည်း ရှိရဲ့၊ စုံနေအောင်ကိုပဲ ကြားရပါတယ်။
အရင်က အဲဒီလိုကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ရင် ပြုကျင့်ခံလိုက်ရတဲ့သူကို victim လို့ သုံးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အားပေးဖို့၊ ထပ်ပြီး စိတ်မှာ ထိခိုက်မသွားဖို့ဟာ သူတို့ကို အားပေးကူညီစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာ မဖြစ်မနေ အလေးထားရတဲ့ကိစ္စမို့ အသုံးအနှုံးကအစ သတိထားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် victim လို့ မသုံးဘဲ survivor လို့ သုံးပါတယ်။ ဒီလိုတုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စကြီးတစ်ခု ဖြစ်သွားတာတောင်မှ ပြန်လည်နိုးထနိုင်သူ၊ အသစ်တစ်ဖန် ရှင်သန်နိုင်သူရယ်လို့ အသိအမှတ်ပြုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ပါ။ အသုံးအနှုံးကတော့ အဲဒီလိုရည်ညွှန်းပေမဲ့လည်း အဲဒီကလေးမလေးတွေ တကယ်ရော ရုန်းထလာနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကတော့ မရေရာ မသေချာပါဘူး။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တောင် ရင်နာနာနဲ့ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဘက်ပေါင်းစုံက ထိုးနှက်ချက်တွေက ရုန်းထလာမဲ့သူတို့လေးတွေကို အသင့်စောင့်ကြိုနေကြလို့ပါပဲ။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နေရာအနှံ့မှာ မတွေ့ရလွန်းလို့ မှန်ဘီလူးနဲ့တောင် လိုက်ရှာနေရတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ဒီနေရာမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်တိုင်းပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကို ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာပါ။ လွှတ်တော်မှာ အမျိုးသမီးပါဝင်မှု ရာခိုင်နှုန်းများလာပြီး အမျိုးသမီးတွေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေတွေ ဒီထက်ပိုပေါ်ထွက်လာဖို့က ခဏထားလိုက်ပါဦး၊ လက်ရှိ ပြဌာန်ထားပြီးသား ဥပဒေတွေကိုပဲ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ ဘာမှ မရှိအောင် အရင်လုပ်ကြရမှာပါ။
ဒီအမှုတွေဟာ ရဲအရေးပိုင်တဲ့အမှုပါ၊ သိရက်နဲ့ ရဲကို အကြောင်းမကြားရင် ထိမ်ချန်မှုနဲ့တောင် အရေးယူလို့ ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျေအေးခွင့်လည်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ တခါတလေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တင် ပြီးသွားပါတယ်။ ညှိခိုင်း နှိုင်းခိုင်းလိုက်ပြီး လျော်ကြေးတစ်စုံတစ်ရာနဲ့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ တရားရုံးထိ ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ရုံးချိန်းတွေ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ တက်ရ၊ ပိုက်ဆံတွေကလည်း ကုန်တော့ ကြာကြာတောင့်မခံနိုင်ကြဘူး။ နောက်ထပ်တစ်ခါ ညှိကြနှိုင်းကြပြီး လျော်ကြေးနဲ့ပဲ ဇာတ်လမ်းက ပြတ်သွားပြန်ပါတယ်။ ကလေးဆိုတော့လည်း ရေလည်အောင် မပြောတတ်၊ တစ်ဖက်ကလည်း အကြောက်အကန်ငြင်း၊ ကျူးလွန်တဲ့သူအများစုကလည်း အခြေမဲ့အနေမဲ့တွေ မဟုတ်၊ ဘယ်လိုမှ ထင်စရာမရှိတဲ့ လူတွေ၊ အများအားဖြင့် ဖြစ်ပြီးအတော်ကြာမှ သိတတ်ကြတာဆိုတော့ ဆေးစစ်ချက်ဆိုတာကလည်း ကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စတိုင်းမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ မတွေ့ရတတ်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေကလည်း တပုံတပင် ရှိနေပြန်သေးတယ်။ ဒီတော့ အမှုကိစ္စက မပြီးဆုံးနိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီလိုကိစ္စတွေမှာ ကိုယ့်ပိုက်ဆံကိုယ်စိုက်ပြီး လိုက်ပါကူညီပေးနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ ပြောဖူးတယ်၊ ခံလိုက်ရတဲ့သူသာ ဗိုက်ကြီးပြီး ကလေးမွေးသွားမယ်၊ အမှုက ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူး တဲ့။ အဲဒီတော့ အစကတည်းက ညှိခိုင်းလိုက်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ အမြော်အမြင်ကိုပဲ လေးစားကြရမလိုလို။ သူတို့ကိုလည်း အပြစ်တင်လို့တော့ မရပါဘူး။ ကိုယ်ဆိုလည်း ဒီလိုအကြံပေးမိမလားပဲ။ ယိုင်နဲ့နေတဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ အဆင်ပြေသလို စီရင်နေကြရပါတယ်။ ဒီတော့ လျော်ကြေးဆိုတာဟာလည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိမဲ့ (ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် win win ပေါ့) အညင်သာဆုံးနဲ့ အမြန်ဆန်ဆုံး စီရင်ထုံးတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီလို လျော်ကြေးကိစ္စဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဂုဏ်သိက္ခာတွေကို ငွေလေးမဖြစ်စလောက်နဲ့ အလဲအထပ်လုပ်လိုက်တာပါပဲ။ တကယ်ဆို လူသတ်မှုကမှ လူပဲသေတာပါ၊ ဒီကိစ္စက ဘ၀တစ်ခုလုံး ရစရာမရှိအောင် စုတ်ပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်သက်လုံး အရိပ်ဆိုးကြီးတစ်ခုက သူတို့လေးတွေနောက်ကို လိုက်နေတော့မှာပါ၊ မထူးဇာတ်ခင်းလိုက်တော့မယ် ဆိုပြီး ပြည့်တန်ဆာဘ၀တောင် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို လျော်ကြေးယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ ဒီကိစ္စတွေဟာ ပိုပိုပြီးတော့ ဖြစ်လာကြတယ်၊ ထိထိရောက်ရောက် အပြစ်ပေးမှု မရှိတဲ့အခါမှာ ကျူးလွန်သူတွေဟာ ဒီလိုလုပ်ရမှာကို မကြောက်ကြတော့ဘူး၊ ထပ်ထပ်ပြီး ကျူးလွန်ကြတယ်၊ အော် ဒါလေးများ လျော်ကြေးပေးလိုက် ပြီးတာပဲ ဆိုတာမျိုးအထိ မြင်လာကြပါမယ်။
ဒါဖြင့် ပြောမှာပေါ့၊ မယူပါနဲ့လား၊ အဲဒီလျော်ကြေးကို။
ဟုတ်ကဲ့၊ မယူလို့မရပါဘူး။ ယူကိုယူရပါမယ်။
ဟုတ်လား၊ တစ်ယောက်ယောက်က အတင်းအကြပ် ယူခိုင်းလို့လား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ယူခိုင်းလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို ယူခိုင်းတဲ့သူက လူပုဂ္ဂိုလ်တော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုပါ။ အဲဒီဆင်းရဲမွဲတေမှုကပဲ သူတို့တွေ လျော်ကြေးမယူယူအောင်ကို တွန်းအားပေးနေတော့တာပါ။
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း သူတို့နေရာမှာ ရောက်နေကြည့်၊ ယူမိမှာပါပဲ။ ဆက်ပြီးတော့ တရားရင်ဆိုင်နေလည်း အချိန်ကုန်မှာရယ်၊ ငွေကုန်ကြေးကျတွေ အများကြီး ရှိလာဦးမှာရယ်ကြောင့် ဒီလိုတရားရင်ဆိုင်တာဟာ နံရံကို ခေါင်းနဲ့ဆောင့်တာနဲ့ ဘာမှမခြားဘူးမဟုတ်လား။ ဒီတော့ သူထောင်ကျပြီး၊ ကိုယ်က ငွေကုန် (ဒါမှမဟုတ်လည်း ရှိသမျှ ပေါင်နှံရောင်းချလိုက်ရ) နဲ့ ဘယ်သူမှ အကျိုးမရှိဘူး။ အေးအေးဆေးဆေး လျော်ကြေးလေး ယူ၊ အိမ်လေးဘာလေး ပြင်ဆောက်၊ ကလေးတွေ ကျောင်းထား၊ မကောင်းဘူးလား။ ဟာ အဲလိုလုပ်ရင် ဒီလူတွေ ခုထက် ပိုပိုဆိုးလာကြမှာပေါ့။ ဒါတော့ မသိဘူးလေ၊ ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး၊ တွေးလည်းတွေးမနေနိုင်ဘူး၊ ကိုယ်ဒုက္ခရောက်၊ ငတ်ပြတ်နေတော့လည်း ဘယ်သူကမှ လာကယ်ကြတာမှ မဟုတ်တာ။
အဲဒီရဲ့ အကျိုးဆက်က ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတွေရဲ့အမြင်မှာ ဒါဟာ လျော်ကြေးတောင်းစရာ ကိစ္စတစ်ခု၊ လုပ်ကွက်တစ်ခုလို (မီးပွိုင့်တွေမှာ ကလေးတွေ ဗန်းပြပြီး တောင်းစားကြသလို) ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး လို့ ဘယ်သူက ကံသေကံမ ပြောနိုင်ပါသလဲ။ အလွန်အမင်း ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေက တိုက်စားပါများလာတော့ မိဘမေတ္တာဆိုတာလည်း အနည်းနဲ့အများ ပွန်းပဲ့လာကြရပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက လူတွေရဲ့အမြင်ကလည်း အဲလို မြင်လာကြပါမယ်၊ အာ ဒီလူတွေ လျော်ကြေးလိုချင်လို့ ကလေးဗန်းပြပြီး တမင်ဂွင်ဆင်တာ ဆိုပြီး။ ဒါဟာ နဂိုကတည်းကမှ ကူကယ်ရာမဲ့နေတဲ့ ကလေးလေးတွေအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ စုတ်တသပ်သပ် လုပ်ပေးမှုလေးကိုတောင် ဆုံးရှုံးကြရဦးမဲ့ အနေအထားတစ်ခုပါ။
ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ ပိုက်ဆံချည်းပဲ ကွက်ပြီး မဆင်းရဲပါဘူး၊ သူ့ရဲ့ အပေါင်းအပါတွေဖြစ်တဲ့ အသိပညာနဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းပါ လိုက်ဆင်းရဲပါတယ်။ မြို့မှာလာကတဲ့ ဇာတ်အဖွဲ့သားတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထပ်ပါ့မယ်၊ အရမ်းချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အလိမ်အညာစကားတွေအောက်မှာ ခြေတော်တင်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတဲ့ ၁၂နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးကို ရွလိုက်တာ လို့ လူတွေအပြစ်တင်နေကြတဲ့အချိန်မှာ သူတို့မသိတာက ဒီကလေးဟာ မိဘမဲ့၊ အရက်သမားဦးလေးနဲ့ အတူနေရတယ်၊ အတန်းပညာ ၂တန်းပဲ အောင်တယ်၊ ဒါတောင် ခု မရေးတာ မဖတ်တာ ကြာတော့ စာမတတ်တဲ့သူနဲ့ ဘာမှမကွာဘူး ဆိုတာတွေပါပဲ။ အဲဒီကလေးမရဲ့ ဆင်ခြင်ဥာဏ်ဟာ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ ရှိနေမယ်ထင်လဲ။ ဆင်းရဲတော့ ပညာမတတ်ဘူး၊ ပညာမတတ်တော့ ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း အားနည်းတယ်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ကို ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူး၊ ကိုယ့်မှာ ဘာအခွင့်အေ၇းတွေ ရှိမှန်း၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမှန်းလည်း မသိဘူး၊ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ သိမနေဘူး၊ သိလည်း မသိချင်ဘူး၊ သိရကောင်းမှန်းလည်း မသိဘူး၊ ထမင်းဝဖို့သာ နံပါတ်တစ်၊ ထမင်းဝဖို့သာ နံပါတ်နှစ်၊ ထမင်းဝဖို့သာ နံပါတ်သုံး ပဲ။ အဲဒီလို အဆိုးသံသရာတွေက ပွဲဈေးက ချားရဟတ်တွေလို တစ်ကြော့ပြီးတစ်ကြော့ကို လည်နေတယ်။
လူငယ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ် တဲ့၊ ရတနာ တဲ့။ ကလေးကောင်းမှ လူကြီးကောင်းတာ တဲ့။ ပြောတော့ပြောကြတာပါပဲ။ ဒီလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုများ တည်ဆောက်ကြမှာတဲ့လဲ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ စစ်အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုကို ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် ပျက်စီးသွားတာတွေထဲမှာ အဆိုးတကာ့ အဆိုးဆုံးပျက်စီးမှုကတော့ စိတ်ဓါတ်ပျက်ဆီးမှုပါပဲ။ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့စိတ်၊ ချမ်းသာဖို့သာ အဓိက၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာတွေ ဘာတွေအရေးမကြီးဘူး ဆိုတဲ့စိတ်တွေက ကျွန်တော်တို့အပေါ် အကြီးအကျယ် လွှမ်းမိုးလာပါတယ်။ ဒီအတွက် ကိုယ့်ရှေ့မှာ ဘာကြီးဖြစ်နေနေ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သရွှေ့ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွါး မထိခိုက်သရွေ့ လက်ပိုက်ကြည့်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ဒီကိစ္စတွေ မရပ်တန့်နိုင်သေးတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုပါပဲ။
ပိုဆိုးတာက ဒီလိုကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ကျူးလွန်သူထက် ခံရသူကို ပိုပြီး အပြစ်တင်တတ်ကြတာပါပဲ။ နင်က ဒီနေရာ ဒီလိုအချိန်မှာ အဖော်မပါဘဲ ထွက်တာကိုး၊ နင်က ဒီလိုဝတ်စားသွားတာကိုး၊ နင်က ဘာလို့ သူခေါ်တဲ့နောက် လိုက်သွားရတာလဲ၊ ခံပေါ၊့ ဖြစ်တာတောင် နည်းသေးတယ် ဆိုတာတွေက မကြားချင်မှအဆုံး ကြားနေရပါတယ်။ ရပ်ကွက်ကလည်း ပြောပါတယ်၊ ရဲတွေကလည်း ပြောပါတယ်၊ တရားရုံးမှာလည်း ပြောပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် လက်မထပ်ခင် ရည်းစားနဲ့အတူနေတယ်၊ အေးဆေးပါပဲ၊ ဘယ်သူကမှ ဘာမှမပြောဘူး၊ ယူတဲ့သူကလည်း ယူကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုအဓမ္မပြုကျင့်ခံထားရတဲ့ မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ ဘယ်သတို့သားကမှ မကြိုက်သလို၊ ဘယ်မိဘကမှလည်း သူတို့ သားနဲ့သဘောမတူပါဘူး။ တကယ်ဆို ကိုယ်ကျင့်တရားရှုထောင့်ကကြည့်ကြည့်၊ ယဉ်ကျေးမှုရှုထောင့်ကကြည့်ကြည့် ဒီမိန်းကလေးတွေဟာ ဘာအပြစ်မှ မရှိကြပါဘူး။ မတရားမှုရဲ့ သားကောင်ဖြစ်သွားရုံလေးတင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးကတော့ စာရိတ္တပျက်ပြားနေတဲ့ အပြစ်သားတစ်ယောက်လို ၀ိုင်းဝန်းဆက်ဆံကြပါတယ်။ ဒီအတွက် မိန်းကလေးတွေဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထုတ်ဖော်မပြောရဲတော့ဘူး။ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို မခံယူရဲတော့ဘူး။ ဖြစ်သမျှကြိတ်ခံကြရတယ်၊ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်မထွက်ရဲကြတော့ဘူး၊ ဒီလိုနဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံး အညွန့်တုံးသွားရပါတယ်။
ဒေါသဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးကိစ္စကတော့ ခုနက ၁၂နှစ်သမီးလေးရဲ့ကိစ္စမှာပါ။ သူတို့နှစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ အတူထွက်သွားတာကို မြင်လိုက်တဲ့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားရဲ့ ယုတ်ညံ့မှုက တကယ်လုပ်သွားတဲ့သူလောက် စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီလို မြင်သွားပြီး နောက်ရက်ကျတော့ အဲဒီကလေးမလေးကို ၀က်အူလှည့်နဲ့ ထောက်ပြီး အဲ့နေ့ညက ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ လို့မေးတယ်၊ ကလေးက ကြောက်ကြောက်နဲ့ အကုန်ပြောပြလိုက်တော့ အဲဒီအကြောင်းတွေကို ကယ်ရီသမားအချင်းချင်း လိုက်ဖြန့်တယ်၊ ခုဆို ရပ်ကွက်ထဲမှာ အတော်များများ သိကုန်ကြပြီတဲ့။ သမီးကိုတွေ့ရင်လည်း ရိသဲ့သဲ့နဲ့ ထိကပါး ရိကပါးလုပ်တယ် တဲ့။ ခုတော့ အဲဒီ survivor ကလေးမလေးလည်း ဒီနေရာမှာ ဆက်မနေနိုင်တော့လို့ နောက်ထပ်တစ်နေရာကို အပြီးပြောင်းလိုက်ရပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တည်းက သွန်သင်ဆုံးမခံလာကြရတဲ့ ယောကျာ်းလေးဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုး၊ မိန်းကလေးဆိုတာတော့ ဘယ်လိုဖြစ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေကလည်း တခါတလေမှာ မိန်းကလေးတွေအတွက် တော်တော်လေး အတားအဆီး ဖြစ်နေပါတယ်။ မိန်းကလေးဆိုတာ အရှက်အကြောက်ကြီးရတယ်၊ လိင်နှင့်ပတ်သက်ရင် မပြောရဘူး၊ မဆိုရဘူး၊ မမေးရမမြန်းရဘူး၊ သိလည်း သိစရာမလိုဘူး လို့ သတ်မှတ်ထားကြတယ်။ ဒီတော့ လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် သူတို့ဘာမှ မသိကြဘူး။ ထုတ်လည်းမပြောရဲကြဘူး၊ တစ်ယောက်ယောက်က လာပြောရင်လည်း နားမထောင်ဝံ့ကြဘူး။ ဒီလိုသွန်သင်ခံလာကြရတဲ့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့အဖြစ်သနစ်ကို တခြားလူတစ်ယောက်ကို ထုတ်ပြောဖို့ဆိုတာ ထင်သလောက် မလွယ်ပါဘူး။ နဂိုတည်းကမှ ရှက်ကြောက်နေရတဲ့ကြားထဲ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ပြစ်တင်ပြောဆိုမှုအန္တရာယ်ကလည်း ရှိနေသေးတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးမှန်သမျှကို တစ်ယောက်တည်းပဲ ခါးစည်းခံကြရပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်လာတယ်၊ အဖေနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန် ၅လရှိနေပြီ ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။
(၆) အရက်၊ လျှပ်စစ်နဲ့ လူနေမှုအဆင့်
သမ္မတကြီးကတော့ အရက်အစား နွားနို့သောက်ဖို့ တခုတ်တရ မှာထားပေမဲ့လည်း လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ အရက်က စိုင်းထီးဆိုင်သီချင်းလို ‘နေရာတိုင်းမှာ’ ရှိနေပြီး နွားနို့ကတော့ စန္ဒီမြင့်လွင်သီချင်းလို ‘ရှာမှရှား’ ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။ Physical access လို့ခေါ်တဲ့ လက်လှမ်းမီမှုကလည်း နေရာအနှံမှာ ရှိနေတယ်၊ Economic access လို့ ခေါ်တဲ့ ဈေးနှုန်းကလည်း သက်သာတယ်၊ လျှပ်စစ်မီးတွေ ပိုလို့တောင် ရောင်းနေရပါတယ်ဆိုပေမဲ့ ခုချိန်ထိ နေ၀င်မီးငြိမ်းဘ၀က မလွတ်ကြသေးတဲ့ သူတို့ရဲ့ဘ၀မှာ ပျော်စရာဆိုလို့ ဒီအရက်ပဲ ရှိတယ်၊ ဒီတော့ သောက်တယ်။ အားလုံးကလည်း လက်ခံထားတယ်၊ သောက်သင့်တဲ့ ကိစ္စအဖြစ်။ ဒီတော့ မူးတယ်၊ ဆင်ခြင်တုံတ၇ားတွေ ကင်းမဲ့လာတယ်၊ နောက်ဆုံးမှာတော့ အဖေက သမီးကို မုဒိမ်းကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ မကြားဝံ့ မနာသာကိစ္စတွေ ဖြစ်လာတဲ့အထိကို အရက်က တွန်းအားပေးလာပါတယ်။
မြို့လယ်ခေါင်မှာ စကဒ်အတို ၀တ်လို့ ဘယ်သူကမှ ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ နယ်မှာတော့ ထမီကို ခြေမ ဖုံးအောင် အထပ်ထပ်ဝတ်ပြီးသွားရင်တောင် အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ဘာလို့လဲ၊ ရှင်းပါတယ်၊ မီဒီယာဆိုတဲ့ စောင့်ကြည့်မဲ့သူ မရှိရင် အစိုးရတွေ မဟုတ်တာလုပ်တတ်ကြတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ လင်းချင်းနေတဲ့ နေရာမှာတော့ ဘာဝတ်ထားထား၊ ပြသနာမရှိဘူး၊ လင်းနေတာကိုး၊ ဘယ်သူက ဘာလုပ်ရဲမလဲ။ တောမှာကျ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး၊ နေရာတိုင်းက မှောင်မည်းနေတော့ မကောင်းမှုလုပ်ဖို့က ငှက်ပျောသီးအခွံနွှာစားရသလို ဖြစ်နေတယ်။
နောက်တစ်ခု၊ ရွာတွေမှာ ဘယ်အိမ်မှ တံခါးတပ်လေ့မရှိဘူး၊ ဒီတော့ အိမ်ထဲကို ၀င်လာပြီး အဓမ္မပြုကျင့်ဖို့ဆိုတာ လွယ်လွယ်လေးလိုပါပဲ။ အိမ်ကကျဉ်းကျဉ်း၊ မိသားစုတွေကများ၊ privacy သီးခြားဖြစ်တည်မှုဆိုတာ လုံးဝမရှိ၊ ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ ဆင်ဆာမဲ့ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်ထားတဲ့ ၆တန်းအရွယ် အစ်ကိုက ၆နှစ်အရွယ် ညီမလေးကို မှောက်မှားတဲ့ကိစ္စတွေလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီလိုကိစ္စတစ်ခု ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီဆိုရင် ပထမဆုံးပြဿနာက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ မရင်းနှီးတဲ့အတွက် ဘယ်ကိုသွားပြီး ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတာပါပဲ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆီ သွားရမလိုလို၊ ရဲပဲ တန်း တိုင်ရမလိုလို၊ အမျိုးသမီးရေးရာကိုပဲ သွားသင့်တာလိုလိုနဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်ကြရပါတယ်၊ တစ်နေရာရောက် ကိုယ့်အဖြစ်ကို တစ်ခါပြောနဲ့ ကြာတော့ စိတ်ပျက်လာကြရပါတယ်၊ ကိုယ့်ကိစ္စ လူတွေသိကုန်တာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာ သိပ်ကိုအလေးထားရတဲ့ Confidentiality ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုတာကိုလည်း ဘယ်သူကမှ ဂရုစိုက်လေ့ မရှိကြဘူး။
အထူးကုဆေးရုံကြီးတစ်ခုရဲ့ ရှေ့တည့်တည့်မှာ ကားတိုက်ရင်တောင် လိုအပ်တဲ့ကုသမှု မခံရဘူး၊ အ၀င်တောင်မခံဘဲနဲ့ ဆေးရုံကြီးကိုပဲ တန်းသွား ဆိုတဲ့ လွဲမှားတဲ့ထင်မြင်ယူဆမှုမျိုးက ဒီမှာလည်း ရှိပါတယ်။ ရဲအရေးပိုင်တဲ့အမှု၊ ရဲမှုခင်းဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုအမှုလာပတ်နိုင်တာမို့လို့ ဘယ်ဆရာဝန် ဆရာမကမှ မထိကြ မကိုင်ကြဘူး။ ရဲဆီပဲ သွားခိုင်းကြတယ်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ မုဒိမ်းမှုမြောက်မမြောက် ဆုံးဖြတ်တာဟာ ရဲနဲ့ တာဝန်ကျဆရာဝန်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုပေမဲ့ ဒီလို လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာေ၇းစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုတော့ ဘယ်ဆရာဝန်၊ဆရာမမဆို ပေးလို့ရပါတယ်။
ရဲဆီရောက်လာရင်တော့ ရဲက စစ်ချက်ယူဖို့အတွက် တာဝန်ရှိတဲ့ ဆရာဝန်ဆီကို ခေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆေးကျောင်းသားဘ၀ကတော့ ဒီလိုအမှုတစ်ခု ဖြစ်ရင် rape case ဟုတ်မဟုတ် အတည်ပြုပေးဖို့၊ စစ်ဆေးပေးဖို့သာ အဓိကထား သင်ကြားခဲ့ကြရတယ်။ ခံလိုက်ရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးမှာ ဘာတွေ ခံစားနေရမယ်၊ ဘာတွေ လိုအပ်နေမယ်ဆိုတာမျိုး မတွေးခဲ့ဖူးကြဘူး။ rape ဟုတ်မဟုတ် စစ်ပြီး၊ မေးပြီး ပြီးပြီ။ တကယ်တော့ မှုခင်းဆေးပညာအရ သင်ကြားခဲ့ရတာ ဆိုပေမဲ့ WHO က ထုတ်တဲ့ Guideline မှာတော့ clinician တစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်ဟာ ဒီလိုစစ်ဆေးဖို့အပြင် survivor ကို အခြေတည်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ ပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာလည်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကို ခံယူခွင့်၊ ဒါမှမဟုတ် ငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့်၊ အမျိုးသမီးဆရာဝန်ကို တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် စတဲ့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကို လေးစားပေးကြရပါမယ်။ ဒီလိုအမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင် ဆရာဝန်တွေအပါအ၀င် အားလုံးက မှုခင်းရှုထောင့်ကနေပဲ ကြည့်ကြတယ်။
တိုင်မယ် တန်းမယ် ဖမ်းမယ် ဆီးမယ် ဒါပဲ။ တကယ်တော့ ဒီအမျိုးသမီးတွေမှာ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ အများကြီး ကြုံတွေ့ရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ မလိုချင်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရတာ၊ အဲဒီကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ချရင်း အသက်ဆုံးပါးသွားနိုင်တာ၊ HIV ပိုး၊ B ပိုး၊ ကာလသားပိုးတို့လို လိင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေ ရသွားနိုင်တာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ၊ ဒါ့အပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း သတ်သေတဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်တာ စတဲ့ ပြဿနာတွေကို အကြီးအကျယ် ရင်ဆိုင်ရဦးမှာပါ။ ဒါတွေမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးပေးဖို့ဟာလည်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ တာဝန်တစ်ခုပါပဲ။ ပြောရရင် Rape ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးပေးဖို့ထက်တောင်မှ ပိုလို့အရေးကြီးပါသေးတယ်။ ဒီလို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို အချိန်မီ ခံယူဖို့ အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကို ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေတင်မကဘူး၊ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကပါ သတိရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ တရားခံက ထောင်ပဲကျကျ၊ သေဒဏ်ပဲပေးပေး၊ ကိုယ်ဝန်နဲ့ကျန်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်၊ ရောဂါတွေ ကူးစက်ကျန်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင် အဲဒီကောင်မလေးတစ်ယောက်အတွက်တော့ ဒါဟာ သူလိုချင်တဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတစ်ရပ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ။
ဒီလိုအတားအဆီးတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ဘ၀၊ ကလေးလေးတွေရဲ့အဖြစ်ကို တွေးမိလိုက်ရင် အရမ်းကိုပဲ စိတ်တွေလေး လေးသွားပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို ကာကွယ်ဖို့၊ ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ မပေါ်ပေါက်အောင် စောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ တစ်ဖွဲ့တစ်ကဏ္ဍတည်းရဲ့အားနဲ့ မရပါဘူး။ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၊ တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍ၊ ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍ၊ စိတ်ပိုင်း၊လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ကူညီပေးမဲ့ကဏ္ဍ၊ ဒါတွေအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှ ရမှာပါ။ လက်ရှိအနေအထားအထိတော့ ဒါဟာ သီအိုရီတစ်ခု၊ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တစ်ခုဆိုတာထက် မပိုသေးပါဘူး။
ကျွန်တော့်ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့ ကလေးမလေးတွေ၊ နောက်လည်း လာထိုင်ကြဦးမဲ့ ကလေးမလေးတွေ လိုအပ်နေတာ ဘာများလဲ၊ လျော်ကြေးလား၊ မျှတတဲ့ တရားစီရင်မှုလား၊ ထိရောက်တဲ့ အကာအကွယ်တွေလား၊ ဒါမှမဟုတ် အပူအပင်ကင်းတဲ့ ကလေးလေးဘ၀လား၊ ကျွန်တော်လည်း မသိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာတာကတော့ ဒီလိုမျိုး ဘယ်လိုမှမစိုးမိုးတဲ့ဥပဒေ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ ပညာမဲ့မှု၊ အကာအကွယ်မရှိမှု၊ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျမှုတွေရဲ့ကြားက မိန်းကလေးတွေရဲ့ဘ၀ဟာ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းသီချင်းထဲကလိုတော့ “မိန်းကလေးအလှ မိန်းကလေးဘ၀ ဒါ အပျော်ရွှင်ဆုံးပေါ့ That’s what we want” ဆိုတာမျိုး လုံးဝ လုံးဝ ဖြစ်မနေဘူးဆိုတာပါပဲ။
Posted by Alex Aung at 5:49 AM No comments:
Labels: Opinion, ကလေးသူငယ်, ဆောင်းပါး
ကြက်ရိုးဟင်းရည် - မြိတ်​ငါးပိထောင်း - သရက်သီးခေတ္တာဟင်း
မြိတ်တံငါသည်ဟင်းလို့လည်း ခေါ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ပင်လယ်ကရလာတဲ့ ငါးအမျိုးမျိုးနဲ့ ပုစွန် အသေးလေးတွေကို အိမ်မှာ အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့ မြိတ်ငါးပိထောင်းနဲ့ ပအုံးရည်နဲ့ ချက်တဲ့ ဒေသအစားအစာ လေးပါ။
ငါးပိ - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း (မီးကင်ထားပါ)
ငရုတ်သီးမှည့်အနီ (အစို) - ၅၀ဝ ဂရမ်
ငရုတ်သီးစိမ်း - ၁၅၀ ဂရမ်
ကြက်သွန်ဖြူ - ၃၅ ဂရမ် (မီးကင်ထားပါ)
ပုစွန်ခြောက် - ၄၀ ဂရမ်
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်တာနဲ့ ရောပြီး ထောင်းထားပါ။
ကင်းမွန် - ၃၀ဝ ဂရမ် (သန့်ရှင်းထားပါ)
ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ငါးအသေး - ၃၅၀ ဂရမ်
ပုစွန်အသေး - ၁၅၀ ဂရမ်
ငါးနပ် - ၃၅၀ ဂရမ်
ပအုံးရည် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
ရေ - ၇၀ဝ မီလီလီတာ
၁။ အိုးတစ်လုံးထဲ ရေထည့်ပြီး ဆူအောင်တည်ပါ။
၂။ ရေဆူသည်နှင့် ပအုံးရည်နှင့် မြိတ်ငါးပိထောင်း ၃ ဇွန်းထည့်ပါ။
၃။ ပြီးလျှင် ပင်လယ်စာအားလုံးထည့်ပြီး ချက်ပါ။
၄။ ပြီးလျှင် ဆားထည့်ပြီး ချက်ပါ။
၅။ အရမ်းလွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး အရသာရှိတဲ့ ဟင်းလေးရပါပြီ။ (ပိုနေတဲ့ မြိတ်ငါးပိ ထောင်းကို သိမ်းထားပါ။)
ရှမ်းအစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ သရက်သီးဟင်းရည်လေးဖြစ်ပါတယ်။ သရက်သီးစိမ်းတစ်လုံးရှိရုံနဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်အဖြစ် တည်ခင်းနိုင်မယ့် အချဉ်ဟင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပဲပုပ်ထောင်းကြော်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ထမင်းမြိန်စေမယ့် အဆီကင်း ဟင်းတစ်ခွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်စားကြည့်ရအောင်နော်။
• သရက်သီးစိမ်း - ၁ လုံး
• မြေပဲလှော်ထောင်း - လက်တစ်ဆုပ်
• ဆား - စားပွဲဇွန်း တစ်ဝက်
• ဟင်းခတ်မှုန့် - အနည်းငယ်
၁။ သရက်သီးစိမ်းကို အခွံနွှာပြီး ပါးပါးလှီးထားပါ။
၂။ ကြက်သွန်နီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ပါးပါးစိတ်ထားပါ။
မြေပဲဆံလှော်ပြီး ထောင်းထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူကို ဓားပြားရိုက်ထားပါ။
၃။ အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပါက ဟင်းရည်ချက်မယ့်အိုးထဲ သရက်သီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ခရမ်းချဉ် သီးတို့ကိုထည့်ပါ။ ရေတစ်ပန်းကန်လုံးထည့်ပြီး ဆူပွက်အောင် တည်ပါ။
၄။ ဆူပွက်ပါက ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်နှင့် မြေပဲထောင်းထည့်ပြီး သရက်သီးအနည်းငယ် အိအောင် တည်ပေးပါ။
၅။ သရက်သီးနူးအိပါက အရသာအပေါ့အငန်မြည်းပြီး နံနံပင်ခတ်ကာ တည်ခင်း သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
(ချက်ပြုတ်ပြသူများ - မအိသက်၊ မြင့်ဦးသာ ၊ Sofia)
Posted by Alex Aung at 10:45 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 1:55 AM No comments:
တရုတ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်မိရင် နားလည်သဘောပေါက်ထားသင့်တဲ့ အချက် ၁၀ ချက်
၁။ တရုတ်မိန်းကလေးအများစုဟာ နားလည်ရခက်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လိုပဲ ပွင့်လင်းမှု မရှိကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ မင်းကို အချိန်ယူစောင့်ကြည့်ပြီးမှ အနည်းငယ် ယုံကြည်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့အခါကမှ မင်းကို သူတို့ရဲ့ အိမ်မက်တွေ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပြောပြလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုတွေ ပြောလာလို့ မင်းနဲ့ ရင်းနှီးလာပြီထင်ပြီး သူမရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိစ္စတွေတော့ သွားမမေးပါနဲ့။ ဒါဟာ သူတို့အတွက်တော့ မယဉ်ကျေးတဲ့ သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ခင်မင်တဲ့ လူအပေါ် အပြန်အလှန် ရင်နှီးတဲ့ အမူအရာတွေ ပြသတတ်ပါတယ်။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေကို သင့်ကို ပြောပြလာပြီဆိုရင်တော့ သူမဟာ သင့်ကို စတင်လက်ခံလာပါပြီ။
၂။ သင်ကြားဖူးမှာပါ။ တရုတ်မိန်းကလေး အများစုက ကြင်နာတတ်ပြီး နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ် ဆိုတာလေ။ ဟုတ်ပါတယ် ဒါတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ အချစ်နဲ့ ပတ်သတ်လာရင်တော့ တယူသန်တွေ များပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တခြား သူစိမ်းလူတွေ သူတို့နဲ့ ခင်မင်မှု ရရှိလာအောင် အနားကပ်လာခဲ့ရင်တော့ သူတို့ရဲ့ သဘောထားဟာ သင်ထင်သလို မဟုတ်တော့တာကြောင့် ဒီအချက်ကိုတော့ သတိပြုပါ။ အဆိုးဆုံး အခြေအနေကို တွေးပြီးမှ ရင်းနှီးမှု ယူတာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
၃။ တရုတ်မိန်းကလေးအများစုက သူတို့အပေါ် Lady First ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ အလေးထား ညှာတာဆက်ဆံတာကို လိုလားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူတို့ရှေ့မှာ ဆဲဆိုတာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အပြုအမှုမျိူး လုပ်တာတွေကို မနှစ်သက်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သူတို့ကို သတိတရနဲ့ surprised လုပ်ပေးတာတွေ အမြဲလိုလို ပျော်ရွှင်အောင် ထားပေးတာမျိူးကို နှစ်သက်ပါတယ်။ အဲ့လို အလိုလိုက်ပြီး ဂရုစိုက်ပေးရင် သင်ဟာ သူ့ဘဝထဲမှာ အရေးပါသူ တစ်ဦး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
၄။ တရုတ်မိန်းကလေးအများစုဟာ ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲ ရောက်နေပါစေ သူတို့ကို ကလေးလို သဘောထားပြီး အရုပ်လေးတွေပေးတာ သဘောကျပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ သူ့အတွက် လက်ဆောင်ပေးဖို့ မေ့နေခဲ့ရင် ကလေးအရုပ်ဆိုင်ထဲသာ ပြေးဝင်ပြီး အရုပ်လေးတရုပ် ဝယ်ပြီး ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဟာ သင့်အတွက် နောက်ဆုံးမိနစ် နောက်ဆုံးကျည်ဆံနဲ့ ချက်ကောင်းထိအောင် ပစ်ခတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၅။ တရုတ်မိန်းကလေးအများစုက အရှက်အကြောက် ကြီးတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုဟာ သင့်ဆီက ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားတခွန်းကို နားထောင်ဖို့ ခက်နေတယ်ဆို သင့်အနေနဲ့ ဆက်ပြောဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့တော့။ သူတို့အနေနဲ့ သင်ဘာပြောပြော လက်ခံတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့နဲ့ အဆင်ပြေဖို့ဆို သူတို့ အများဆုံး ပြောနေတဲ့ သင့်ဆီက မကြိုက်တဲ့ သင့်ရဲ့ အမှားတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် သူတို့ဆီကနေ အနည်းငယ် သင့်ကို ချီးကျူးတာမျိူးကို တစ်ခုခု ကြားရဖို့ မျှော်လင့်ပါ။
၆။ ဟာသအကြောင်း ပြောနေတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်း လူမျိူးတိုင်းမှာ ရှိကြတဲ့ ဓလေ့တစ်ခုပါ။ ချစ်သူ စုံတွဲတေကြားမှာလည်း ဟာသလေးတွေ ပြောပြီး အတူတူ ရယ်မောလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကြိုက်မိပြီ ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ အမှားတစ်ခုကို လုပ်မိသလို ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့နဲ့တွေ့တိုင်း ဟာသတွေ ညစ်ညမ်းတာတွေ ပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ဟာ သင်ပြောနေပေမယ့် နားထောင်ချင်မှ နားထောင်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ဟာ သင်ပြောတဲ့ ဟာသတွေကို နားချင်မှ နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ဆက်ပြောနေပေမယ့် သူတို့ဟာ စိတ်ရှုပ်တဲ့ အမူအရာမျိူး ပြသလာမယ်ဆို သင့်အနေနဲ့ သူမအနားကနေ ထွက်သွားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
၇။ တရုတ်ပြည်ကြီးဟာ တိုးတက်လာပေမယ့် မပြောင်းလဲသေးတာကတော့ တရုတ်မိန်းကလေးတွေရဲ့ မိန်းမဆန်ဆန် နေထိုင်တတ်တဲ့ ရိုးရာဓလေ့လေးပါ။ သူတို့ဟာ သူတို့ဘဝအတွက် အကောင်းဆုံး အထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ့်သူကို မျှော်လင့်တတ်ကြပြီး သင်ဟာ သူမရဲ့ လက်တွဲဖော် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆို သင့်ရဲ့ ပြုမှုနေထိုင်ပုံဟာ ပိုမိုထက်မြက်ပြီး ရှေ့ရေးကို တွေးတောနိုင်တဲ့လူ ဖြစ်ရပါမယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ သူမရဲ့ စည်းအတွင်းကို သင်ဝင်ခွင့်ရလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
၈။ တရုတ်မိန်းကလေးအများစုဟာ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် စီမံခန့်ခွဲရတာ ဝါသနာပါတဲ့ မိန်းကလေးများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ အိမ်သန့်ရှင်းရေးမှအစ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးအဆုံး သူတို့ပဲ စီမံခန့်ခွဲသွားပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဆီက အိမ်နဲ့ပတ်သတ်လို့ အကူညီတစ်ခု တောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်သုံးစရိတ်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၉။ သင်ဒီတစ်ခုကို လုံးဝမေ့လို့ မရပါဘူး။ သူတို့ဘဝမှာ အရေးအကြီးဆုံးက သူတို့ရဲ့ မိဘတွေပါ။ လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီအချက်ကို မမေ့ပါနဲ့။ သူတို့မိဘဆိုတာ သူတို့အတွက်တော့ မြင့်မြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် သူမရဲ့ မိဘတွေပြီးမှ သင့်အတွက်ဆိုတာ လာပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခု သင့်အနေနဲ့ တရုတ်မိန်းကလေးကို ယူတော့မယ်ဆို သူမရဲ့ ဆွေတော်မျိူးတ်ာစာရင်းကို အလွတ်ရနေဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ သူမရဲ့ အဖိုးအဖွားကနေ ဦးလေး အဒေါ် တစ်ဝမ်းကွဲမောင်နှမ ဆွေမျိူးတွေကနေ သေဆုံးသွားတဲ့လူတွေအထိ သိထားဖို့လဲ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ 😂😂😂😝
မှတ်ချက်။ ။ အခုခေတ်တော့ လိုချင်မှ လိုတော့မှာပါ။ မလိုပါစေနဲ့။ ငိ ငိ ငိ
၁၀။ တကယ်လို့ တရုတ်မိန်းကလေး တစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်တော့မယ်ဆို ဒီအဆင့်တွေကို ဖြတ်ကျော်ရပါတော့မယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ လက်ထပ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ သင့်ကို အဖြေမပေးခင် မေးခွန်းတွေကို မေးလေ့ရှိပါတယ်။ သေချာလေးနက်စွာနဲ့ သင့်ဘဝကို အတွင်းကျကျ မေးမြန်းလေ့ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အဖြေပေါ် မူတည်ပြီး သူတို့ဟာ သင့်ကို ရည်းစားအဖြစ်သာ တွဲသင့်သည် သို့မဟုတ် သူမရဲ့ အနာဂတ် ခင်ပွန်းလောင်း စသည်ဖြင့် တခါတည်း ရွေးချယ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Posted by Alex Aung at 1:54 AM No comments:
Labels: Relationship Advice, ဆောင်းပါး
Posted by Alex Aung at 5:21 AM No comments: